China 3inch 12mm Orbital Sander Mini Variable Speed ​​Dual Action Car Buffer Polisher DF12A mpanamboatra sy mpamatsy | Checheng
Item TSY: CHE-DF12A
Ity 12mm 3inch mini DA polisera ity no fomba azo antoka sy mora indrindra hahazoana loko tonga lafatra. Izy io dia matanjaka ampy ho an'ny matihanina nefa azo antoka ho an'ny vao manomboka. Afaka mahazo vokatra tsy misy kilema ianao raha tsy miasa mafy. Ity polisy orbital 3inch ity dia natao ho an'ny fampiononana sy fifehezana. Izy io dia manana motera 900W azo itokisana izay manome azy fahaiza-manao tena tsara hanerena tsindry ary hanala haingana kokoa ny kilema. Ny fifehezana hafainganam-pandeha dia manome hafainganam-pandeha miovaova avy amin'ny 2500 ka hatramin'ny 6500 OPM, izay manala ny marika sy ny tadiny ary haingana sy azo antoka.
Takelaka tohana 2cm 3in, lovia 1pc, torolàlana 1pc, borosy karbaona 1pr
4.Lavy maivana, mora tazonina sy miasa.
Haingam-pandeha 5.Fast, mahomby amin'ny famolavolana fiara.
6.Setting miaraka amin'ny fanaraha-maso hafainganam-pandeha 6.
7. Rafitra haingam-pandeha tsy tapaka miaraka amina fiandohana malemy.
8.Ny seranan-tsambo boribory karbonika dia manamora ny fanovan'ny mpampiasa ny borosy karbonina.
Previous: 5inch Car Polisher Polishing Machine 8mm Auto Wax Buffer DF8A
Manaraka: Vidiny 8mm DA Car Polisher 900W Orbital Sander Buffer DF8